किन बिहान निन्द्राबाट उठ्ने बित्तिकै मुखबाट दुर्गन्ध आउँछ ? कतै यो कुनै रोगको कारण त होइन ? – Etajakhabar
किन बिहान निन्द्राबाट उठ्ने बित्तिकै मुखबाट दुर्गन्ध आउँछ ? कतै यो कुनै रोगको कारण त होइन ?
ताजा खबर:- बिहान उठ्ने बित्तिकै मुखबाट आउने दुर्गन्धको के कारण हुनसक्छ? कतै राती ब्रश नगर्नाले त होइन? यदि तपाई पनि बिहान निन्द्राबाट उठ्ने बित्तिकै मुखबाट आउने दुर्गन्ध प्रति सोच्नुहुन्छ भने जान्नुहोस् कि राती ब्रश नगर्दा मुखबाट दुर्गन्ध मात्र नभई यो कुनै अन्य कारण पनि हुनसक्छ । हुनत: मुखबाट दुर्गन्ध आउनुको कारण पेटको खराबी हुन्छ तर बिहान सुतेर उठ्दा मुखबाट जो दुर्गन्ध आउँछ, यसको अलग कारण हुन्छ ।
वास्तवमा मुखमा बन्ने र्यालले दुर्गन्ध फैलाउने ब्याक्टेरियालाई नष्ट गर्ने काम गर्छ । यो र्याल भोजन गर्ने समयमा बन्छ र कुनै कारणले यसको निर्माण कम मात्रामा हुन्छ भने मुखको ब्याक्टेरिया पूर्ण रूपमा नष्ट हुन पाउँदैन । साथ-साथै कम र्याल बन्नुको कारणले तपाईको मुख पनि सुख्खा हुन्छ । यो सुख्खापन रातीमा मुखबाट श्वास लिने, घुर्ने या औषधीको सेवनले हुनसक्छ । रातीमा मुखको सुख्खापन जति बढी हुन्छ, मुखबाट त्यतिनै बढी दुर्गन्ध आउने सम्भावना हुन्छ ।
के कुनै रोगको कारणले मुखबाट दुर्गन्ध आउँछ?
बिहान सुतेर उठ्नेबित्तिकै मुखबाट दुर्गन्ध आउने एक सामान्य समस्या हो । बढीजसो मानिसलाई यो समस्या रहेको हुन्छ । हरेक पटक यो कुनै रोगको संकेत हुँदैन तर केही अवस्थामा यो कुनै रोगको संकेत पनि हुनसक्छ । जस्तै गिजा सम्बन्धि कुनै समस्याको कारणले मुखबाट दुर्गन्ध आउनथाल्छ । यसको साथै पेटमा कुनै पनि किसिमले संक्रमण हुनु पनि मुखबाट दुर्गन्ध आउने कारण हुन्छ । यदि थुप्रै उपाय पछि पनि यो दुर्गन्ध कम नभएमा र लगातार रहीरहेमा तपाईले चिकित्सकको सल्लाह लिन अत्यन्त आवश्यक हुन्छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर १५, २०७४ समय: १५:५१:५१